Taxi-moto, bisikileta ary sarety Handraisana fepetra manokana
Nilaza ny handray fepetra manokana amin'ny taxi-moto sy bisikileta ary sarety mitondra olona an-tsokosoko ny fanjakana.
Raha zohina mantsy tsy mba anisan'ireo nahazo fanampiana ireto farany ka mahatonga azy ireo mbola manohy ny asa. Fanagiazana mandritra ny andro maro no miandry raha araka ny fanazavana avy amin’ny tompon’andraikitra. Tsy misy marimaritra iraisana hita mihitsy hatreto amin’ny fampiodinana ny firenena ary marobe ny sehatra izay efa mitaraina vokatry ny jadona izay misy. Ny tena ahiana hamono, hoy ny sasany, dia ny hanohanana noho ny Covid19.